Acer aspire 4741,4741G xp Driver
ဒါကတော့ Acer aspire 4741,4741G XP Driver လေးပါ ညီနေ၀င်းအောင် ကလဲကျွန်တော့်ကို အကူညီတောင်းထားတာကြာပါပြီး သူတို့ဆီမှာ ဒေါင်းမရလို့ ကျွန်တော့မှာလဲ လိုင်းမရလို့ အခုမှကျွန်တော်ဒေါင်းပြီး တင်ပေးလိုပ်ပါတယ် စာဖတ်သူတွေလဲ လိုခဲ့ရင်အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ။Bluetooth Broadcom Download ifile.it | Download mediafireCard Reader Driver Download ifile.it | Download mediafireTouchpad Driver Download ifile.it | Download mediafireUSB Driver Download ifile.it | Download mediafireWebcam Driver Download ifile.it | Download mediafireChipset(1) driver Download ifile.it | Download mediafireChipset(2) driver Download ifile.it | Download mediafire Realtekaudio Download ifile.it | Download mediafire VGA intel driver Download ifile.it | Download mediafireVGA Nvidia G310M Download ifile.it | Download mediafireLan driver Download ifile.it | Download mediafireWlan Atheros Driver Download ifile.it | Download mediafireWlan Broadcomm Driver Download ifile.it | Download mediafire
All Cobra Driver Pack 2010 for XP - Vista - Windows7
ဒါကတော့ All Cobra Driver Pack 2010 ဖြစ်ပါတယ် XP - Vista - Windows7 အတွက်ပါ အားလုံးသုံးနိုင်ပါတယ် Driver ခွေပျောက်လို့ အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းပြီး ခွေနဲ့ဘန်းထားပေါ့ Windows7 အတွက် သက်သက် တင်ပေးအုံးမယ် လောလောဆယ် ဒါလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ အားလုံး 14 ဖိုင်ခွဲထားပါတယ် ဖိုင်ဖြည်ဖို့အတွက် ဒီမှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ 689.91mbမှတ်ချက် - ISO Burn နဲ့ Burn ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Download mediafire | part1 ၊ part2 ၊ part3 ၊ part4 ၊ part5 ၊ part6 ၊ part7 ၊ part8 ၊ part9 ၊ part10 ၊ part11 ၊ part12 ၊ part13 ၊ part14 Read More
ဒီဆော့လ်ဝဲကတော့ TubeDownload.v2.6.4 လေးပါ ဒီဆော့လ်ဝဲက youtube ကနေ video တွေကို ဒေါင်းလော့ဆွဲတဲ့ အခါ Converter လုပ်စရာမလိုတော့ပဲ တစ်ခါတည်း ကိုလိုချင်တဲ့ formart ကိုရွှေးပြီးဒေါင်းလို့ရပါတယ် ဥပမာ၊ Mp3၊ Mp4၊ 3GP၊ Mpge1 အဲလိုမျိုး formart တွေပေါ့ Converter လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ formart တော်တော်များပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ 4.37mb Download ifile.it | Download mediafire Read More
ဒါကတော့ Download.Manager.5.19.2 လေးပါ shout box မှာတောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုတာရှိရင်လဲ အော်လိုက်ပါ ရှာနေပါတယ်Download.Manager.5.19.2 ကိုလိုချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါအဆင်ပြေပါစေ။ 4.05mb(အမြဲတမ်း သုံးနိုင်တဲ့ နည်းလေးကတော့ လွယ်ပါတယ် Install လုပ်ပြီးရင် ညာဘက်အောက်မှာ Download.Manager. ico လေးကို Right click ထောက်ပြီး Exit လိုက်ပါ ပြီးရင် IDM 5.19.2 Crk & Reg ဖိုင်ထဲက IDMan ဆိုတာကို Copy လုပ်ပြီး C:\_Program Files\_Internet Download Manager မှာသွားပြီး Paste လိုက်ပါ ပြီးရင် RegKey ဖိုင်လေးကို Run လိုက်ရင် အမြဲတမ်းသုံးနိုင်ပါပြီး) ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Download ifile.it | Download mediafire Read More
manual proxy အသစ်လေးများ
IP Port 203.81.81.38 >> 80 203.81.81.49 >> 80 212.93.193.88 >> 443 212.116.220.100 >> 443 212.93.193.89 >> 443 212.93.193.90 >> 443 134.153.184.17 >> 443 212.116.220.149 >> 443 192.18.102.59 >> 443 212.93.193.82 >> 443 212.93.193.83 >> 443 212.93.193.72 >> 443 ဘာ Program မှ ခံသုံးစရာ မလိုပါ . (freedom နှင့်အခြားသော program များကိုဆိုလိုသည်)Tools >> options >> advanced ကို သွားပြီး Network ကို ရွေးလိုက်ပါ . setting ကို ရွေးပါ . (4)ကြောင်းမြောက်က manual proxy configuration: စာကြောင်းရဲ့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ HTTP Proxy : နဲ့ Port: အကွက်မှာ အခုပေးထားတဲ့ proxy no. နဲ့ Port ကို သာထည့်လိုက်ပါ .ဘာ software မှ ခံစရာမလိုတော့ပါဘူး . အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ကျွန်တော် ဖျားနေလို့ ဘာပို့စ်မှ မတင်နိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး . အားလုံးအဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ကျွန်တော့် ညီလေး မြင့်ဇော်ကိုလဲ ကျွန်တော့်လိုပဲ အကူအညီတောင်းပြီး မေးလ်ပို့မေးလို့ရသလို လိုချင်တဲ့ software တွေလဲ သူ့ဆီမှာ တောင်းလို့ရပါတယ် .
ဒါကလဲ ညီလေးတစ်ယောက်က အကို metacafe setup အဲဒါလေးလိုချင်လို့ပါ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် MetacafeSetup1.4.20.0 လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို အားကိုးတစ်ကြီးနဲ့ ဆော့လ်ဝဲတောင်းထားတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ များအားလုံး အရင်က ကျွန်တော်လိုင်းမရလို့ မရှာပေးနိုင်တာကိုတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ အခုမှ ကျွန်တော်လိုင်း နည်းနည်းရလို့ ပြန်ရှာပေးနိုင်တာပါ နောက်မှ တောင်းထားတဲ့ ဆော့လ်ဝဲမျာ ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါမယ် အခုမှလိုင်းသိမ့်မပြေသေးလို့ ကြာနေရင် နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ် MetacafeSetup1.4.2 ကိုလိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ။Download ifile.it | Download mediafire
kaspersky keys အသစ်များ
ကျွန်တော် kaspersky keys တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ. ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်လဲ ပျက်ကွက်မှုတွေ ပေးဆပ်မှုတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လျှော့လျှော့ လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ အမာခံ နည်းပညာ လေ့လာသူများ အားလုံးကို တောင်းပန်ချင် ပါတယ် . ဒီနေ့ kaspersky keys အသစ်တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Download ifile.it
All Cobra Driver Pack 2010 for XP - Vista - Window...